Ny tantaran'ny famolavolana mailaka sy mailaka | Martech Zone
44 taona lasa izay, Raymond Tomlinson niasa tamin'ny ARPANET (talohan'ny governemanta amerikana ho an'ny daholobe misy), ary namorona mailaka. Raharaha lehibe tokoa io satria hatrizay dia tsy afaka mandefa hafatra sy mamaky an'io solosaina io ihany. Io dia namela mpampiasa sy toerana iray nosarahan'ny marika &. Rehefa nasehony ny mpiara-miasa amin'i Jerry Burchfiel, ny valiny dia:
Aza miteny an'iza n'iza! Tsy izany no tokony kasaina hiasa.
Ny mailaka voalohany nalefan'i Ray Tomlinson dia ny mailaka fitsapana an'i Tomlinson nofaritana ho tsy misy dikany, zavatra toa ny "QWERTYUIOP". Mandrosoa haingana anio ary misy kaonty mailaka maherin'ny 4 lavitrisa miaraka amin'ny 23% amin'izy ireo natokana ho an'ny orinasa. Tombanana ho 200 miliara eo ho eo ny mailaka halefa amin'ity taona ity fotsiny miaraka amin'ny fitomboan'ny 3-5% isan-taona araka ny Vondrona Radicati.
Tantaran'ny fanovana ny famolavolana mailaka
Email moanina dia nanambatra an'ity horonantsary mahafinaritra ity momba ny zavatra nampidirina sy nampidirina tamina mailaka nandritra ny taona maro.
Ny hany hany iriko mailaka dia ny mpanjifa toa ny Microsoft Outlook hanatsara ny fanohanany ny HTML5, CSS ary ny horonan-tsary mba hahafahanay manala ny tenantsika amin'ny sarotra rehetra mahazo mailaka ho tsara tarehy, milalao tsara ary mifanaraka amin'ny haben'ny efijery rehetra. Be loatra ve izany?
Tags: anti-phishingAOLbarack obamaCan-amin'ny spamdkimDMARCe-mailmailakatantaran'ny mailakamailaka MarketingftcGmailtabilao gmailtantaran'ny mailakaHotmailTPTmicrosoft outlookMMSkoreana avaratratoe-tsainaphishingcontactmailSonyamin'ny spamlalàna spamspfny simpsonsMisy taratasy ho anao
Ary na dia aorian'ireo taona rehetra ireo aza dia mbola misy toerana amin'ny marketing amin'ny mailaka